Windows 10 icharatidza iyo "Linux" folda yeWSL munguva pfupi iri kutevera | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe ndichifanira kubvuma kuti handichashandisi, ini pachangu handidi, ndakapedza chinguva «ndichitamba» nayo. WSL kubva kuMicrosoft. Uine Linux terminal unogona kuita zvinhu zvakawanda, sekushandura mafaera kuenda kune mamwe mafomati pasina chikonzero chekuisa imwe software muWindows, izvo zvinonyatso kudzora zvinhu pasi. Chinhu chakaipisisa chaive chekuwedzera nzira kumurairo kuti uwane mafaera anobuda, chimwe chinhu chisingazodiwa mune yemberi vhezheni ye Windows 10.
Zvandakaita muzuva rayo zvainyanya kunzwisisika: wedzera kune kuruboshwe jenareta refaira maneja dhairekitori repamba reUbuntu hwangu, iyo yakavanzwa zvakanaka uye kuwana kwayo kwaive kwakadzvanywa kwakawanda kure. Zvese izvi zvichave nyore mune ramangwana: sekuverenga kwatinoita mu cherekedza kuti Microsoft yatumira maawa mashoma apfuura, kana uchiisa chero kugoverwa kweLinux kuburikidza ne Windows Subsystem ye Linux, kutsva kutsva kuchawedzerwa. Iyo icon yavakasarudza, zvingaite sei neimwe nzira, ndiyo inozivikanwa penguin, Tux.
Windows 10 icharatidza iyo "Linux" dhairekitori uye maforodha ekugovera
Nhau dzave kuwanikwa kuInsiders, zvinova ndizvo zvinonzi neMicrosoft "beta testers." WSL inotibvumidza kuisa iyo kernel yezvakasiyana zvekuparadzirwa kweLinux uye imwe neimwe iine yayo maforodha, saka mukati me "Linux" dhairekitori ivo vanozogadzirwa maforodha ane zita rezvipo iyo yatakaisa, senge Ubuntu, Debian kana Kali Linux.
Iyo vhezheni ichawedzera iri basa ichave Vakai 19603. Microsoft haina kutaura kuti izvi zvichave riini Windows 10 inogadziridza ichave iripo, asi zvinotarisirwa kurova maPC ese akatsigirwa panguva kana mushure meiyi zhizha, chero bedzi vasingaonane nedombo munzira kana inozivikanwa COVID-19 inodaro zvinopesana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Windows 10 icharatidza iyo "Linux" folda yeWSL munguva pfupi iri kutevera
Pindura ku hacklat2
Teregiramu Desktop 2.0 inosvika iine mashoma shanduko uye mamonikisi eCovid-19